नेतृत्व चयनको कांर्यभार कार्यकर्तालाई सुम्पेका छौंः अध्यक्ष ओली – नेपाली जनता :: Nepali Janta:
काठमाडौं । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पार्टीको दशंैँ राष्ट्रिय महाधिवेशनमा नेतृत्व चयनको कार्यभार प्रतिनिधि तथा कार्यकर्ताको भएको बताउनु भएको छ । अध्यक्ष वा कुनै पनि पदमा अरुलाई नउठ्न भनेर आफूले कसैलाई दबाब नदिने बताउनु भयो ।
पार्टीको महाधिवेशनका सन्दर्भमा आज सो पार्टीको केन्द्रीय प्रचार विभागद्वारा सम्पादकहरुसँग आयोजित छलफल कार्यक्रममा अध्यक्ष ओलीले “हाम्रो मतदाता घटेको छैन । केही मान्छे बिग्रिएर पार्टी छाडेर गए । त्यसयता सयौँको पार्टी प्रवेशले पार्टीलाई थप बलियो बनेको छ । हाम्रो काम नेताहरुको व्यवस्थापन मात्रै होइन, मुख्य काम देश बनाउने कुरा हो ।” आउने निर्वाचनबाट एमाले नै सरकारमा आउने उहाँको भनाइ थियो ।
अध्यक्ष ओलीले देश बनाउने नीति, कार्यक्रम र योजनाहरु गत विधान महाधिवेशनले पारित गरिसकेकाले यो महाधिवेशनले मुख्यरुपमा नेतृत्व निर्माणको काम गर्ने बताउनुभयो । अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– “यसपल्ट मूलरुपमा उक्त नीतिहरुको कार्यान्वयनका लागि कस्तो नेतृत्व आवश्यक छ भन्ने छनौटको अभिभारा महाधिवेशनका प्रतिनिधिलाई सुम्पदै छौं । मुलुककोवर्तमान अवस्स्था के हुन् र अब, देशलाई कुन नीति र आधारका साथ अगाडि लान सकिन्छ भन्नेबारेमा नेतृत्व निर्माण महाधिवेशनको मुख्य कार्यसूची छ ।’
महाधिवेशन उद्घाटनम ासवारी साधनको उपलब्धताको सीमाका कारण पाँच लाख जनसमुदाय मात्रै सहभागिता गराउने जानकारी उहाँले दिनुभयो ।
एक प्रश्नको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले अध्यादेशबाट २० प्रतिशत दल विभाजन गर्न पाउने राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन तथा एमालेले कारबाही गरेका सांसद्लाई सामेल गरेर खोलिएको नेकपा (एकीकृत समाजवादी) लाई दलीय हैसियतमा महाधिवेशनमा आमन्त्रण गर्न नमिल्ने जवाफ दिनुभयो ।
उहाँले वास्तविक कम्युनिष्टहरु एकताबद्ध रहेको तर कम्युनिष्टको बर्काे ओढेकाहरुलाई एकता नगरिने बताउनुभयो ।
अर्काे प्रश्नमा उहाँले एमाले न्यायालय स्वतन्त्र, निष्पक्ष र लोकतान्त्रिक प्रणालीयुक्त होस् भन्ने चाहन्छ भन्नुभयो ।
सरकार हटाइएको प्रतिनिधिसभाले थाहा नपाउने गरी परमादेशबाट सरकार गठन गर्ने स्थिति हुनुहुँदैन । महाधिवेशनले लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट सहमति वा निर्वाचनबाट छानिने नेतृत्वलाई आफूलाई सहजरुपमा स्वीकार्ने बताउनुभयो । तपाईंलाई सर्वसम्मत अध्यक्ष हुने स्थितिमा केही चुनौती आएको हो ? भन्ने प्रश्नमा अध्यक्ष ओलीले भन्नुभयो– “एमाले लोकतान्त्रिक पार्टी हो । यसमा कुनै प्रकारको जोरजुलुम छैन । म उठ्ने–नउठ्ने टुङ्गो गरेको छैन । त्यसैले मलाई अध्यक्षमा छोड्न वा चुनौती दिन पाइन्छ । अरुलाई नउठ्न दबाब दिन्नँ । म अध्यक्ष भएमा पार्टीमा सबैलाई समान व्यवहार गर्छु ।” अध्यक्ष ओलीले उपाध्यक्ष डा. भीम रावलले अध्यक्षमा उठ्छु भनेर आफूलाई चुनौती नदिएको बरु आफूप्रति आदार, सम्मान, स्नेह दिनभएको भनाई राख्नुभयो । रावलको स्नेहपूर्ण सुझावबाट आफू प्रभावित भएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष ओलीले दशौं महाधिवेशनले एमाले फुट्यो, कमजोर भयो भन्ने भ्रमहरुलाई चिर्ने र पार्टीलाई शुद्धिकरण गर्दै एउटै लयमा अगाडि बढाएर मुलुकको समृद्धिका लागि पुनः नेतृत्व गर्न सक्ने शक्ति आर्जन गराउने बताउँदै एमाले एकजुट, सुदृढ र व्यापक छ भन्ने सन्देश महाधिवेशनले दिने बताउनुभयो ।
पार्टीका सचिव एवं प्रचार विभागका प्रमुख योगेश भट्टराईले पाँच लाखको सहभागितामा यही मङ्सिर १० गते चितवनको नारायणी नदी किनारमा निर्मित विशेष मञ्चमा महाधिवेशनको उद्घाटन गरिने र ७२ जना कलाकारको सामूहिक धुनबाट राष्ट्रिय गान बजाइने लगायतका कार्यक्रम तय भएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले महाधिवेशले आगामी निर्वाचनमा बहुमत हासिल गर्ने सामथ्र्यका साथ एमालेलाई स्थापित गर्ने बताउनुभयो । महाधिवेशनको बन्दशत्र चितवनको सौराहामा हुनेछ । महाधिवेशनमा मनोनितसहित दुई हजार दुई सय प्रतिनिधि हुनेछन् । उद्घाटनशत्रका लागि पाँच हजार स्वयंसेवक परिचालन गरिने भट्टराईले बताउनुभयो । महाधिवेशनमा विद्युतीय मेसिनबाट मतदान हुनेछ ।
१०,मंसिर.२०७८,शुक्रबार १३:५९ मा प्रकाशित
पाँचदलीय गठबन्धनले एमालेलाई उछिन्छ- आचार्य, पोखरा महानगर प्रमुखका प्रत्यासी
गठबन्धनले हामीलाई केही फरक पर्दैन: बाबुराम भट्टराई